China Leap milina-ZHDB andian-dahatsoratra haingam-pandeha automatique laminating milina mpanamboatra sy mpamatsy | dingana
Masinina mitsambikina-ZHDB andian-tsarimihetsika haingam-pandeha mandeha ho azy
Masinina mitsambikina-ZHDB andiana haingam-pandeha ho an'ny milina fanosotra mandeha ho azy, ny endriny dia ampidirina ao anaty rafitra lehibe amin'ny alalàn'ny mombamomba ny firenena ary voadona amin'ny mombamomba ny alimina mahery, miaraka amina rafitra mafy orina sy azo antoka.
Ny milina Leap milina haingam-pandeha haingam-pandeha dia misy fehikibo conveyor, fitoeram-bokatra, fonosana fananganana, lovia manohana mihetsiketsika, lozisialy fanosehana, takelaka manohana, fanakanana, famonoana conveyor sns, sns. dia mety amin'ny toerana misy famaritana halava samy hafa tsy misy fanitsiana. Môtô servo matevina roa no ampiasaina handroahana sy hifehezana ny fiakarana ny ampahany laminated. Ny tetezamita voahosotra dia mifandray tsy misy ifandraisany amin'ny metaly fanenjana sy fanosehana. Ny mekanisma takelaka fanosehana dia entin'ny servo fehin-kazo mifangaro, ary ny isan'ny lamination dia fehezin'ny PLC amin'ny alàlan'ny fanisana photoelectric. Ny milina Leap milina haingam-pandeha haingam-pandeha dia mampiasa rafitra fiarovana roa mekanika sy herinaratra mba hiantohana ny fiarovana ireo fitaovana, ary mandray ny rafitra fanaraha-maso manan-tsaina PLC, fifandraisana amin'ny masinina milina lehilahy. Ny milina fanosotra mandeha ho azy amin'ny gorodona haingam-pandeha dia afaka mampihena ny asa, manalavitra ny fahasimbana amin'ny lamination amin'ny gorodona ary mampihena ny hamafin'ny asa. Ny milina Leap milina haingam-pandeha haingam-pandeha dia fitaovana famokarana tsipika fivoriambe ilaina amin'ny fizotry ny famokarana mandeha ho azy ireo mpanamboatra fanaka vita amin'ny gorodona.
Ny motera servo (motera SERVO) dia motera iray mifehy ny fihetsiky ny singa mekanika ao anaty rafitra servo. Fitaovana fandefasana ankolaka izay manome fanampiana ny motera.
Ny motera servo dia afaka mifehy ny hafainganam-pandeha, ny maha-marina ny toerana dia tena marina, afaka mamadika ny mari-pamantarana herinaratra ho lasa torque sy hafainganana handroahana ilay zavatra voafehy. Ny hafainganam-pandehan'ny motera Servo dia fehezin'ny signal input, ary afaka mamaly haingana, amin'ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy, ho toy ny singa mpanatanteraka, ary manana fe-potoana elektromekanika kely tsy miova, toetra mampiavaka avo lenta, dia azo raisina amin'ny alàlan'ny famantarana elektrika ao anaty angovo famindran-toerana na fivoahan'ny hafainganam-pandeha. Mizara ho motera dc servo sy motera servo AC. Ny mampiavaka azy indrindra dia ny hoe rehefa aotra ny savaivon'ny signal, dia tsy misy fisehoan-javatra mihodina, ary mihena mitovy ny hafainganam-pandehan'ny haavo.
Hafainganana 8 ～ 10 / paleta / min
Herin'ny motera 3,25 kW
Haben'ny birao Ny halavany 800 ～ 1800 mm
Haavon'ny pelet 20 ～ 100 mm
Teo aloha: Masinina mitsambikina haingam-pandeha lehibe
Manaraka: Masinina haingam-pandeha haingam-pandeha 2 toerana manipulator gantry tokana ary mampidina ny masinina
Ny milina fanodinana valiha amin'ny milina Leap
Ny tsipika fanamafisam-peo ho an'ny Leap Machines
Ny milina Leap milina mavesatra 180 degre turno ...